Nhau - CHEMISTRY ANALYZER
Otomatiki biochemical analyzers zvichibva pane microfluidic tekinoroji yakashandiswa mumakumi ezviuru emasangano ekurapa pasi rese.
Mushure mekuwedzera anticoagulated ropa rese, maitiro ese kubva pakuparadzaniswa kweplasma, kuwanda, kuendesa, kusanganisa, kuita kudhinda bvunzo mhinduro inogona kupedzwa otomatiki mumaminitsi manomwe. Iyo analyzer ine yakavakirwa-mukati yakangwara yemhando yekudzora system, iri nyore kushandisa uye kudzidza.
Ropa chemistry analyzerinogona kushandiswa kuona zvikamu muropa uye kutarisa kushanda kwezvikamu zvakasiyana-siyana zvemuviri. Yedu microfludic yakavakirwa ropa chemistry analyzer mudziyo wakatorwa kubva kune aerospace tekinoroji, iyo inoshandiswawo muindasitiri yemazuva ano yemhepo. Mushure memakore mashanu ekuyedzwa kwakasimba kwevhu, muongorori wekemikari yeropa Pointcare M anozoiswa pachiteshi chemuchadenga cheChinese chakatangwa muna 2022 kuti vape ongororo yekemikari yeropa yemazuva ese kune vanoongorora nyeredzi mu orbit.
Zvakavimbika lab-chaiyo mhinduro
The blood chemistry analyzerinopa nekukurumidza uye yakavimbika lab-chaiyo mhedzisiro uye yakagadzirirwa kushandiswa nehunyanzvi munzvimbo yekiriniki marabhoritari kana kunzvimbo-yekutarisira. Mushure mezvidzidzo zvakakura zvekubatanidza, kurongeka, kurongeka uye kuberekazve kwePointcare® M kwakanyatso kuratidzwa. Muongorori wemakemikari eropa Pointcare® M ane mukurumbira mumakiriniki, zvipatara zvinoremekedzwa munyika, uye munzvimbo dzakawanda.
Yakarurama-Chaiyo-nguva Kudzora Hunhu
The blood chemistry analyzerzvishandiso zvine inoshanda zvakanyanya onboard quality control system (RQC). Iyo inogara ichitarisa iyo disc basa uye reagent mhando kuti ive nechokwadi chekuita kweyedzo yakakwana. Deredza kukanganisa ne-chaiyo-nguva QC uye kubvisa kusvibiswa kwekutakura ne-single-use panels kuti uve nechokwadi chezvinoreva, kuenzanisa nemigumisiro ine traceability yakazara.
Inoenderana Multiple chipatara ruzivo system
Tinokutsigira munzvimbo dzose dzaunoda. Iyo manejimendi chikuva chakagadzirirwa chipatara uye marabhoritari ruzivo masisitimu, anosanganisira HIS, LIS, HR, LMS uye EMR. Rerutsa uye kuenzanisa maitiro ebasa uye kuderedza basa revashandi.
Matanho matatu akareruka ekukurumidza, kuita kwakanaka.
Kushanda kuri nyore uye kwakachengeteka, matanho matatu akareruka ekukurumidza, kuita kwakanaka. Pointcare M yakagadzirirwa kurerutsa mafambiro ako nekureruka kwekushandisa, kuchinjika uye kubuda, kuti iwe ugone kutsaura vashandi kuti vaite mabasa akawedzera kukosha.
Diki bhokisi rakakura kuita (Simba bhangi rinokwanisa)
Yakakwana saizi yezvirongwa uko nzvimbo yakaganhurirwa. Compact dhizaini uye yakareruka (2.2kg) inokodzera kushandiswa kwenharembozha kunze kwemaitiro ehutano ekuchengetedza hutano nevachengeti vehutano kumba.
Midziyo yakanyatsogadzirirwa yeChinese Space Station ine yekutanga-kirasi kugadzikana uye kuvimbika kwepamusoro, uye inoda kunenge kusagadziriswa. Kushandiswa kwemarambi exenon semwenje sosi ine theoretical kushanda nguva yemakumi emakore.
Imwechete-shandisa yakawanda-yebvunzo pani inosanganisira chemistry, electrolyte, immunoassay uye nezvimwe.
Menyu yekuyedza yemakumi matatu nematatu ma paramita anosanganisira chemistry, electrolyte, uye immunoassay ndiyo yakafara pane chero nzvimbo-ye-kutarisira. analyzer. Nekuedza kwechikwata chedu cheR&D chine mutengi, iwo bvunzo ma paramita acharamba achiwedzerwa.
Kubva kuZvipatara zvinoremekedzwa kusvika kuPrimary Care zvakakupoteredza
Pointcare® M inogona kushandiswa zvakanyanya muPrimary Care, Emergency, ICU, Mobile practitioners, Pediatrics, Oncology, Hospitals, Government & Military, Research & Other.
Ipa chaiyo-nguva yekutarisira yekusimudzira kugutsikana kwemurwere
Vachengeti vanogona kuita pani yakazara inosvika gumi nenhatu chemistry bvunzo pa-saiti mukati me8～12 maminetsi. Masekondi emaoko-nenguva, maminetsi ekugadzirisa mhinduro. Ipa vatengi mhinduro dzekukurumidza panguva yekushanya kwavo uye chengetedza nguva yehunyanzvi nekuremedza-uye-kuenda kunyatsoita.
Wedzera sampuli uye diluent Isa disc Verenga zvabuda
Runhare: 86 028-85456506
Nguva yekutumira: Nov-26-2021